Waliwe ingoduso wayibhokoda ngommese owaseSweetwaters | Eyethu News
Waliwe ingoduso wayibhokoda ngommese owaseSweetwaters
“Uqale wayinklinya ubusuku bonke ngaphambi kokuba ayibulale.”
UNks Babhekile Shelembe obhokodwe isoka lakhe ngemuva kokuba elalile. Isithombe : Sithunyelwe
UMNDENI wowesifazane waseSweetwaters usababaza isihluku ekubulawe ngaso indodakazi yawo ebhokodwe isoka layo ngoba ithe abahlukane ngoLwesibili emini.
UNks Babhekile (38) nobeseyingoduso kwisoka lakhe, utholwe enamanxeba okugwazwa umzimba wonke kanti utholwe indodakazi yakhe eneminyaka eli-17 ubudala edindilize ekameleni lakhe.
Ngokusho kukadadewabokamufi uNks Thoko Shelembe uthe umufi ufike ekhaya ngoLwesibili ekuseni ephelezelwe isoka lakhe njengoba kade elale kubo, lamubeka esangweni wabe esengena endlini elungiselela ukuya edolobeni.
“Ngesikhathi efika ekuseni ufike watshela indodakazi yakhe ukuthi ucishe wafa njengoba isoka lakhe kade limuklinya ubusuku bonke lithi liyamubulala ngoba ethe abahlukane, kodwa laphinda lamuyeka lathi liyamuxolela kodwa ngelinye ilanga liyombulala,” kubeka yena .
Uqhube wathi ngemuva kokuba umufi engene endlini isoka alizange lihambe kodwa beliloku lizulazula emgwaqeni kwaze kwahamba unina kamufi noyise lasala lasesha ezinganeni ukuthi kukhona bani nelibe seligulukudela ngaphakathi.
“Udadewethu ubesegezile elungisela ukugqoka njengoba ebezoya edolobheni . Kusho ukuthi ufike wamumboza ngekhava yombhede ngoba asimuzwanga ngisho ekhala njengoba besihleli kwenye indlu, ngoba iyona esiyithole ifihlwe phezu kuka-wodrope igcwele igazi. Ingane yakhe iyona emutholile kade ithi izobheka ukuthi usehambile yini ukuya edolobheni. Ikhuze umhlola ikhala imemeza sagijima samuthola embozwe ngesiketi abesi ayinele ukuthi uzosigqoka edolobheni nokuthe uma simunyakazisa sathola ukuthi usethulile useyabanda ugcwele amanxeba umzimba owonke ngisho ekhanda,” kuqhuba yena.
Umsolwa kuthiwa ushaye wachitha nezimpahla ezigcwele igazi ebezigqokwe umufi okubalwa kuzona ngisho isikhindi sangaphansi njengoba ebonakele ephuma ebaleka neplastic. Kuthiwa uphinde wakhuthuza nesikhwama sikamufi wathatha yonke imali wasishiya sivuliwe.
Lomndeni uthi namanje usashaqekile ukuthi umsolwa angenza into efana nalena ngoba ubengumuntu ozithulelayo kanti futhi besebemujwayele bemazi njengomuntu olungile. Nakuba umsolwa kade esecele isihlobo esihle kaShelembe kodwa bebengakabi nazo izingane nomufi.
Okhulumela amaphoyisa esiteshini iPlessislaer uKapteni Musa Ntombela usiqinisekisile isigameko wathi kodwa akukaboshwa muntu. “Amaphoyisa aphenya icala lokubulala kodwa bekungakaboshwa muntu, ngemuva kokuba owesilisa egwaze wabulala intombi yakhe eSweetwaters ngoLwesibili emini. Umsolwa usagcwele amathafa,” kubeka uNtombela.
Kuhlomule izikole ezintathu eSweetwaters